ခံစားမှု့သံစဉ်: August 2011
သို့ ..ကိုကြီးကျောက် (ရွှေရတုမှတ်တမ်း)
Posted by blackroze at Tuesday, August 30, 2011 11 comments
တခြားသူမဟုတ်ပါဘူး...အားလုံးကချစ်စနိုးနဲ့ ဘကျောက် လို့ခေါ်တတ်ကြတဲ့
သူကွယ်လွန်သွားပါပြီ...တကယ်လို့များ အခုနေခါ သူရှိနေဦးမယ် ဆိုရင်
သူဘာတွေရေးမလဲ သူဘာတွေပြောမလဲ ကျမစဉ်းစားနေမိပါတယ်....
သူဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ blog day အမှတ်တရတွေကဘာတွေလဲ...
သူအမှတ်တရရှိနေမဲ့ blogger တွေကဘယ်သူတွေလဲ...
အပြန်အလှန် တဂ်ပိုစ့်လေးတွေရေးခိုင်းကြ ....တယောက်ရေးပြီးတင်လိုက်တာကို ကျန်တဲ့သူတွေက
ကိုကြီးကျောက်တနေရာကနေ တိတ်တိတ်လေး ကြည့်နေမယ်ထင်ပါတယ် ....
30.8.2011 AM 1:42
blog day အမှတ်တရ...
Posted by blackroze at Friday, August 26, 2011 16 comments
ဒီညတော့ကော်ဖီတခွက်နဲ့ ဆရာသမားကိုမောင်မျိုးတဂ်ထားတဲ့ blog Day အမှတ်တရ အပီအပြင်ရေးတဲ့
ညပါဘဲရှင်..မနက်ဖန်ကျမအလုပ်ပိတ်ပါတယ်... အဲတော့ ဒီညမအိပ်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူး...။
ကျမဒီဘလော့ လေးကိုစလုပ်ဖြစ်တာက 2009 ဒီဇင်ဘာလောက်မှာပါ ..။ အဲဒီတုန်းကအမြဲတမ်း သုံးဖြစ်တဲ့
ဆိုက်ဒ်လေးက ချော့ကလက်မြို့တော် ဆိုတဲ့ ဆိုက်ဒ်လေးပါ ။ အဲဆိုက်ဒ်လေးကနေ casper လို့
ခေါ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ခင်သွားပါတယ်...။တခြားခင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေလည်း အများကြီးပါ..။
ဒါပေမဲ့ ကျမကလည်း ကဗျာဝါသနာပါသလို သူကလည်းကဗျာရေးတဲ့သူပါ ...တနေ့သူနဲ့ gtalk မှာ
ကဗျာအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ သူကသူလုပ်ထားတဲ့ Blog အကြောင်းပြောပြပါတယ်.... ကျမက ကျမလည်း
အဲလိုလုပ်ချင်တယ် ...လို့ပြောတော့ သူကသူကူညီပေးမယ် သူအားတဲ့အချိန် လုပ်ပေးမယ် ဆိုပြီး...
ကျမကိုဒီဘလော့လေး လုပ်ဖို့သူကူညီပေးခဲ့တာပါ ...(သူ့ကိုအမမိုးငွေ့တို့သိမှာပါ .. အရင်က နေညှိ ဆိုတဲ့
နာမည်နဲ့ သူဘလော့ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်..အခုတော့သူလည်းဘလော့မရေးတော့ပါဘူး ....)ကိုးရီးယားမှာ
အဲတာနဲ့ ကျမရဲ့မြောက်မြားလှစွာသော ခံစားချက်တွေကို ချရေးဖို့ ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်လေး တဖြစ်လည်း
ခံစားမှု့သံစဉ် ဆိုတဲ့ ဒီဘလော့လေး ဖြစ်လာတာပါ....ကျမဒီဘလော့လေးမှာပထမဆုံးစရေးဖြစ်တာက
ဥပေက္ခာ အချစ်ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးပါ ....ဘယ်သူမှလာမဖတ်ပါဘူး....ဘယ်သူမှလည်းကျမကိုမသိပါဘူး...
အဲနောက်ပိုင်း ကျမ ကဗျာတွေတော်တော်များများရေးဖြစ်တယ်.....နောက်ပြီးကျမတွေးမိတာလေးတွေ
ကျမဘလော့ရေးခဲ့တဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ ပထမဆုံးတဂ်ပိုစ့်ကတော့
တကမ္ဘာ လုံး Waka Waka လို့အော်ဆိုနေကြတဲ့အချိန်မှာ...မောင်မျိုးကဘဲ
ဘယ်အသင်းဗိုလ်စွဲမလဲ...ဆိုတဲ့ TItle နဲ့ တဂ်ဖူးတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ...
ဒုတိယမြောက်ကတော့ မနမ်းရဲ့ ကြိုက်၏မကြိုက်၏ ဆိုတဲ့ တဂ်ပိုစ့်လေးပါ
အခုပိုစ့်ကတော့ တတိယမြောက် တဂ်ပိုစ့်ပါဘဲ...။
ကျမ ရဲ့ဘလော့မှာ (ကျမရဲ့သူငယ်ချင်းမဟုတ်ဘဲ အပြင်ကစာဖတ်သူပေါ့) ပထမဦးဆုံးကောမက်လာပေးတဲ့သူကတော့ ဇီဝက (ဆေး-၂) ပါဘဲ....သူဘယ်သူဆိုတာကျမမသိပါဘူး....ကျမေ၇းတဲ့ စစ်နဲ့ဂီတ ဆိုတဲ့ ပိုစ့်လေးမှာသူကော်မက် ရေးပေးသွားတာပါ.....အခုသူလည်း Blog ဆက်မရေးတော့ဘူးလား မသိပါဘူး
သူ့လင့်လေးလည်းသွားလို့မရတော့ပါဘူး.... သိတယ်ဆိုရင်လင့် ပေးခဲ့ကြပါဦး...
ဇီဝက (ဆေး-၂) on 19 February 2010 10:41 said...
the pianist ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ကျွန်တော်လည်း အရမ်းကြိုက်တယ်။ ဂျာမန်စစ်ဗိုလ်က စန္တာရားတီးခိုင်းတဲ့အခန်းကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ဒီ review လေး ရေးထားတာ အရမ်းကောင်းတယ်။ နောင်လည်း များများရေးနိုင်ပါစေလို့။
ဒုတိယကောမက်ကတော့ ဘဝပန်းချီကား ဆိုတဲ့ပိုစ့်လေးမှာ
ကော်မက်ရေးပေးခဲ့တဲ့ ကေသရီ ပါဘဲ....သူလည်းအခုဘလော့မရေးတော့ဘူးထင်ပါရဲ့လေ ....။
ကေသရီ on 1 April 2010 16:59 said...
အတွေးနဲ့ အရေးလေးက နူးညံ့သိမ်မွေ့လိုက်တာ။ ဘ၀ဆိုတဲ့ ပန်းချီကားလေးကို လှပစွာ ချယ်မှုန်းနိုင်ပါစေညီမရေ။
တတိယ ကောမက်ကတော့ အလွမ်းကဗျာတွေေ၇းတဲ့ ကိုညလင်းအိမ် ပါဘဲ....ကျမရဲ့ ကဗျာလေးတပုဒ်မှာ ကောမက် ရေးပေးခဲ့တာပါ..နောက်ပိုင်းကဗျာတွေကိုလည်း
ညရဲ့ကောင်းကင် on5April 2010 15:31 said...
လွမ်းဆွတ်စရာလေးပါလား ... ရေးတတ်တယ်ဗျာ ...
အဲဒီနောက်ပိုင်းတော့ ကျမရဲ့ဘလော့လေးစီကိုလာလည်ခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေကတော့ ..ကျမကမကြီးချောလို့
ခေါ်တဲ့ အမချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) ..အမမြသွေးနီ.. ဦးမြစ်(မြစ်ကျိုးအင်း) ...ကိုဗညား ..ကိုဆိုစီ....မသိင်္ဂါကျော်...ဆွေလေးမွန် ...အမွန် (မြတ်မွန်)..ဆရာသမားကိုမောင်မျိုး ...နေဝသာန်..သဒ္ဒါ..
မနမ်း(အဖြူရောင်နတ်သမီး)...ဘိလပ်ကသူကြီးမင်း (အဲလောက်ဆိုသိကြမယ်ထင်တယ် ဘယ်သူဆိုတာ
ကျမသူ့ကိုပေးထားတဲ့နာမည်ပြောင်လေးက ၃ထိပ် ၅ပိတ်ပါ..ဟဲဟဲ ဖွတာ ဖွတာ..အကိုရေ..စိတ်မဆိုးပါနဲ့
စတာနော် :P) ...အမမိုးငွေ့..ကိုမောင်လေး.. (ခုတော့ကိုညိမ်းနိုင်ပေါ့ ကျမစသိတုန်းကတော့ ကိုမောင်လေးလို့ဘဲမှတ်ထားတာပါ) .... အမ (စိတ်၏ဖြေရာ )နာမည်သေချာမသိလို့ပါအမရေ...
ဆင်ထဲကဖေးက သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ ကိုရေသန့် ကိုပေါ့ဆိမ့် .. ဘလက်ကော်ဖီ ....လသာညဖြစ်ပါတယ်လို့ရေးတတ်တဲ့ အမ(လသာည)...
တခါတလေ လာလည်ဖူးတဲ့ အမရွှေစင်ဦး.....အမချစ်ကြည်အေး....အမခင်ဦးမေ..
ညအင်္လကာ...နေသွေး(bravo) ....flower poem ....ကိုသက်တန့်ချို....အမနှင်းနဲ့မာယာ..ရင်ခွင်ရှိန်း..
မိုးယံနဲ့ကိုးကိုးအိမ် (သူတို့နှစ်ယောက်လည်းတခါတလေ လာလည်ဖူးကြပါတယ်)
တော်တော်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ ..ပန်းနုနှင်းဆီလေး ..မယွန်း...ခိုင်နုငယ်...ကိုအုပ်ကြီး...ညီဇံလှ...ပူးတေ...
ခုနောက်ပိုင်းကျမစီလာလည်ကြတဲ့ ကျမရဲ့သူငယ်ချင်းအသစ်တွေကတော့ ..
စိတ်ဓာတ်အစဉ်ကြည်လင်အေးမြပါစေကွယ် လို့ဆုတောင်းပေးတတ်တဲ့ အန်တီတင့်.....။။
နောက်ပြောချင်တာလေးကတော့ အခုကျန်းမာရေးအရ ဘလော့ဆက်မရေးဘဲခဏရပ်ထားတဲ့
ကိုဏီ(အကိုဏီလင်းညို)..အကိုရေ စာတွေအမြန်ဆုံးပြန်ရေးနိုင်ပါစေလို့ ညီိမဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်..
နောက်ပြီးကျမကအရိပ်လို့ခေါ်တဲ့ ညီသူအိမ် ပါဘဲ..သူနဲ့စသိတုန်းက သူ့ဘလော့ကမေပလ်သူ ဆိုတဲ့
နာမည်နဲ့ပါ...အဲတော့ကျမလည်းသူ့ကိုမိန်းကလေးလို့ ထင်မိပါတယ်....gtalk မှာစကားပြောဖြစ်တော့
ညီမလို့ခေါ်မိတော့မှ..သူကကျနော်မိန်းကလေး မဟုတ်ဘူးဆိုတော့မှ ကျမသူ့ကိုယောက်ကျားလေးမှန်း
နောက်တယောက်ကတော့ စိုးဧပြီရယ်မွန်သီချင်းဆိုက်ရဲ့ blogger ကိုစိုးပါဘဲ...
ကျမကိုBlog နဲ့ပတ်သက်ပြီး...မသိတာတွေသင်ပေးခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ပါ...
ပညာဆိုတာမျှဝေရတယ် အမရဲ့ ဆိုပြီးကျမကိုမသိတာတွေပြောပြကူညီပေးခဲ့သူပါ...
တာဝန်ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်ပါစေလို့ ကျမဆန္ဒပြုပါတယ်ကိုစိုး....
ကျမကိုစာရေးဖို့ တွန်းအားတွေအများကြီးပေးခဲ့တဲ့ ...
စာတွေအများကြီးရေးပါလို့ပြောခဲ့တဲ့....... ကျမရဲ့ ........ သူငယ်ချင်း ညီမြတ်သူ
သူမပြန်ခင်တုန်းကတော့ကျမblog နဲ့ပတ်သက်တာတခုခုလုပ်နေရင် မပြီးသေးဘူးလား လို့ခဏခဏ
ဂဂျီဂဂျောင် ကျပေမဲ့..သူပြန်သွားတာနဲ့..ပစ်ပစ် ကိုယ်တို့အကြောင်းတွေရေးနော် လို့
ကျမကဗျာတွေအကြောင်းပြောရင် အားနာပါးနာ နဲ့ နားထောင်ပေးတတ်တဲ့
ကျမရေးတဲ့စာတွေကဗျာတွေကို အမှတ်မထင်လာဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ .....
ကျမ Blog day ရဲ့ အမှတ်တရလေးတွေပါဘဲ
အခုဆိုရင်ကျမ blog ရေးခဲ့တာ 2နှစ်နီးပါးလောက်ရှိတော့မှာပါ...ဒါပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့..
မနေ့တနေ့ကမှ Blog စရေးသလိုပါဘဲလေ....ကောမက်လေးတွေတွေ့လိုက်ရင်..ရင်ခုန်တုန်း..
c-box ကို အပြေးအလွှားကြည့်မိတုန်း....ကျမခံစားချက်တွေအများကြီး..ရေးဖြစ်ဦးမယ်ထင်ပါတယ်....
ကျမမရေးဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ တနေ့ကျရင်လည်း...ကျမအားလုံးကိုအမှတ်တရ အနေနဲ့ ရင်ဘတ်ထဲမှာ
သေချာသိမ်းထားမှာပါ....blog လောကထဲမှာဘဲခင်မင် ရပေမဲ့...ကျမဖြူစင်စွာနဲ့ အားလုံးကို...
ဒီပိုစ့်လေးရေးဖို့ တဂ်ထားတဲ့ မောင်မျိုးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။
ကဲ..နောက်ဆုံးပြောချင်တာလေးကတော့..ကျမဒီည facebook မှာ cityvalle မဆော့ဘဲ
အခုမနက် 5း42 ရှိနေပြီမို့ ...... Hi ..all... Morning ..!
26.8.2011 AM 5: 43
Posted by blackroze at Friday, August 19, 2011 12 comments
နင်နဲ့ငါ အမြဲတမ်းသူငယ်ချင်း "
လို့ပြောခဲ့တဲ့ စကားသံလေး ....
ဆိုတဲ့ စကားသံတွေ ....
ဆိုတဲ့ စကားသံလေး ......
(19.8.2011 - AM 3: 12)
(ပုံလေးကို www.google.com မှ ယူပါသည် )
Posted by blackroze at Friday, August 12, 2011 10 comments
လူတယောက်ကိုလွမ်းဖို့ ချစ်ဖူးကြပါသလား...ဘယ်သူမှတော့ လွမ်းဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစမချစ်ခဲ့ကြပါဘူး။
ချစ်ရင်းနဲ့သာလွမ်းတတ်သွားကြတာပါ ။ ညတိုင်းမြင်နေကြကနေ တညလောက်မမြင်ရရင် လွမ်းတယ် ။
အမြဲတမ်းဖုန်းပြောနေကြကနေ ဖုန်းတရက်လောက် မဆက်လာရင် လွမ်းတယ်။ကော်ဖီတူတူသောက်နေကြကနေ တယောက်တည်း ကော်ဖီသောက်ရရင် လွမ်းတယ် ။
ထမင်းတူတူစားနေကြကနေ တယောက်ထဲထမင်းစားရရင်လည်း လွမ်းတာဘဲလေ ။ဘယ်အရာမဆို
နှစ်ယောက်တူတူ ရှိနေရာကနေ တယောက်ထဲလုပ်ရတာမျိုးတို့ တယောက်ထဲသွားရတာမျိုးတို့ဆိုရင်
အလွမ်းက သိသိသာသာကြီးကို ရင်ထဲဖြစ်တည်လာတော့ပါဘဲ ။
ညပေါင်းများစွာ မှာ တယောက်နဲ့တယောက် မျှဝေခံစားဖော်တွေအဖြစ်နေလာခဲ့ပြီးမှ အခုလိုကျမတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကျမအရမ်းလွမ်းမိပါတယ် ။အရင်ကအချိန်တွေ ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ အသေအချာသိနေပေမဲ့လည်း ရင်ထဲမှာမဝံမရဲမျှော်လင့်နေမိပြန်တယ်...။ အလုပ်မှာအဆင်မပြေတာ ကြုံလာတဲ့အခါ ကျမခံစားပေါက်ကွဲတာကို နားထောင်ပေးနေကြ သူ့ကိုလွမ်းတယ် ။ကျမအပြင်သွားစရာကိစ္စတွေပေါ်လာတိုင်း အမြဲတမ်းဘဲ ပြန်လာရင် မုန့်ဝယ်ခဲ့လို့မှာနေကြ သူ့ကိုလွမ်းတယ် ။လကုန်လို့ လခစာရင်းစာရွက်လေးရလာတိုင်း အမြဲတမ်းသူနဲ့တူတူ ဖောက်ကြည့်နေကြမို့လို့ လခစာရင်းစာရွက်လေးကို တယောက်ထဲ
ဖောက်ကြည့်ရတဲ့အခါတိုင်း သူ့ကိုလွမ်းတယ် ။ကျမအလုပ်ကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားစရာ တခုခုရှိလာတိုင်း
သူ့ကိုလွမ်းတယ် ။သူကကျမအိမ်ပြန်လာရင် အမြဲမေးနေကြလေ .ဘာတွေစားခဲ့လည်း ။ဘယ်ဆိုင်
သွားစားတာလည်း ။ စားကောင်းလား ။ တနေရာရာသွားပြီးတိုင်း ပြန်လာရင် သူ့ကိုပြန်ပြောပြနေကြ
ဆိုတော့ အခုကျမဘယ်သွားသွား ဘာလုပ်လုပ် မေးမဲ့သူမရှိတော့ စိတ်ထဲတမျိုးကြီးပါဘဲလေ။
ကျမအဝတ်အစားဝယ်လာတိုင်း သူ့ကိုပြနေကြဆိုတော့ အခုကျမပစ္စည်းတခုခုဝယ်မိတဲ့ အခါတိုင်း
သူ့ကိုလွမ်းတယ် ။ဝယ်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေသိမ်းရင်းနဲ့ ရင်ထဲမှာအလွမ်းဆိုတာတွေရှိနေပြန်တယ်လေ။
ကျမအလုပ်ကပြန်လာပြီး ကွန်ပြူတာဖွင့်လိုက်တိုင်း " ပစ်ပစ် ပြန်လာပြီလားလို့ " မေးနေကြ သူ့ကို
လွမ်းတယ် ။ကျမနေ့လည် အလုပ်သွားခါနီးတိုင်း " ပစ်ပစ် ထမင်းမြန်မြန်စား ..Blog ကစာတွေလိုက်ဖတ်မနေနဲ့တော့ တော်ကြာအလုပ်နောက်ကျမယ် " လို့ သတိပေးတတ်တဲ့သူ့ကိုလွမ်းတယ်။
ကျမ အလုပ်မှာထမင်းစားပြီးတဲ့ အချိန်တိုင်း ကျမပို့လာမဲ့message ကို မျှော်နေတတ်တဲ့ သူ့ကိုလွမ်းတယ်။
အခုဆိုရင် ကျမmessage ပို့လည်း သူ့စီမရောက်တော့ဘူးဆိုတာ သိနေပေမဲ့ ကျမသူ့ကိုလွမ်းတဲ့အကြောင်းတွေ ရေးပြီး Message တွေပို့မိတယ်။သူ့စီေ၇ာက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ
သိနေပေမဲ့ ကျမmessage တွေပို့နေမိတုန်းဘဲ။ ကျမအလုပ်ကပြန်လာပြီး ညဘက်တွေ facebook မှာ cityvalle ဆော့ရင်းနဲ့သူ့ကိုလွမ်းတယ် ။သူရှိနေသားနဲ့ အဲလိုဂိမ်းတွေဝင်ဝင်ဆော့တာသူကမကြိုက်ပါဘူး ကျမကလည်းဆော့လိုက်ရမှ ဆိုတော့ ခဏခဏ ရန်ဖြစ်နေကြပါ။ ခုတော့ကျမတယောက်တည်း ဂိမ်းဆော့ရင်းနဲ့ ရန်ဖြစ်နေကြ သူ့ကိုလွမ်းတယ် ။ ကျမညဘက်အိပ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း သွားတိုက်ဖို့
ဆေးသောက်ဖို့ အမြဲမှာနေကြ သူ့ကိုလွမ်းးတယ်..။ သွားတိုက်နေရင်းနဲ့ မျက်၇ည်ကျမိတဲ့ညတွေတောင်
ရှိခဲ့ပါတယ် ။ဆေးသောက်ဖို့ ရေငှဲ့ရင်းနဲ့ ထိုင်ငိုမိတဲ့ ညတွေရှိတယ် ။ကျမအိပ်ခါနီးတိုင်း သူကမက်ဆေ့ခ်ျ
ပို့နေကြပါ ။ကျမညအိပ်ယာဝင်တိုင်း ရောက်လာမှာမဟုတ်တော့တဲ့ သူ့message လေးတွေကို လွမ်းတယ်..။ကျမမနက်စောစောသွားစရာရှိတိုင်း ဖုန်းဆက်ပြီးနိုးပေးနေကြ သူ့ကိုလွမ်းတယ် ။
ကျမအဝတ်အစားတထည်ဝယ်ပြီးတိုင်း လှမလှ ကျမနဲ့လိုက်မလိုက် အမြဲဝေဖန်ပေးနေကြ သူ့ကို
လွမ်းတယ် ။ကျမဆံပင်ညှပ်ဆိုင် သွားမယ်လို့ ပြောတိုင်း "ဆံပင်တွေအများကြီး ညှပ်မပြစ်နဲ့နော်" လို့
မှာတတ်တဲ့ သူ့ကိုလွမ်းတယ် ။သူနဲ့ကျမ နှစ်ယောက်တူတူဂိမ်းဆော့တဲ့အခါတိုင်း ကျမကရှုံးမဲ မဲတတ်တဲ့
သူမို့ ကျမရှုံးတော့မဲ့အခြေအနေ ဆိုရင် ကျမမခံချင်အောင်လိုက်လိုက်စတတ်တဲ့သူ့ကိုလွမ်းတယ် ။
သူကျောင်းသွားပြီးသူ့သီးဆစ် ကိုကြည့်ပေးမဲ့ဆရာနဲ့သွားတွေ့ရတဲ့ရက်တွေတိုင်း ကျောင်းကပြန်လာရင်
ကျမကြိုက်တတ်တဲ့ မုန့်တွေဝယ်လာပေးတဲ့ သူ့ကိုလွမ်းတယ် ။ညဘက်ဘုရားစာတူတူ ဆိုခဲ့ဘူးတဲ့
အချိန်တွေကိုလွမ်းတယ်။ကျမစိတ်ကူးပေါက်ရာဆွဲထားတဲ့ ပုံတွေကိုကွန်ပြူတာထဲမှာ အမြတ်တနိုး
သိမ်းထားေ ပးတတ်တဲ့ သူ့ကိုလွမ်းတယ် ။ကျမကလေးဘဝတုန်းကပုံလေးတွေကြည့်ပြီး ပုံတူဆွဲပေးတတ်တဲ့
သူ့ကိုလွမ်းတယ် ။ဒေါသဖြစ်စရာပြသနာတခုခုတက်တိုင်း ဟန်မဆောင်ဘဲ ပေါက်ကွဲတတ်တဲ့သူ့ကိုလွမ်းတယ် ။ကျမဘယ်လောက်ဘဲသူ့အပေါ်အနိုင်ယူနေပါစေ ...အမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်ပြီးအလျှော့ပေးတဲ့ သူ့ကိုလွမ်းတယ်..။ကျမသူ့အနားမှာမရှိပေမဲ့ ကျမမွေးနေ့ကို
အမှတ်တရ ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ သူ့ကိုလွမ်းတယ် ..။ကျမစိတ်ဆိုးတဲ့အခါ အရုပ်မလေးတရုပ်
ဝယ်လာပြီး ပြန်ချော့တတ်တဲ့ သူ့ကိုလွမ်းတယ်...။
ရှမ်းခေါက်ဆွဲ အရမ်းကြိုက်တဲ့သူ့ကို လွမ်းတယ် ။သူပြုံးလိုက်တိုင်းပေါ်လာတဲ့ ပါးချိုင့်လေးနှစ်ဘက်ကိုလွမ်းတယ်..။အသံဝဲဝဲ စကားသံလေးကိုလွမ်းတယ် ။
ကျမက ကဗျာတွေဝါသနာပါပေမဲ့ သူကတော့ ကဗျာဆိုရင်နဲနဲမှမခံစားတတ်တဲ့သူပါ ။
ကျမကအိမ်မက် တွေကိုမလိုချင်သူပါ ။သူကတော့ အိမ်မက် ဆိုတာက စိတ်စွဲလန်းမှု့ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုပြီး အိမ်မက်ကိုခံစားတတ်ပါတယ် ..။ကျမကချယ်ဆီးကြိုက်ပေမဲ့ သူကမန်ယူပရိတ်သတ်ပါ ။
ဒါပေမဲ့ ကျမတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တယောက်ကိုတယောက် အရမ်းချစ်ပါတယ်..။
အခုသူဘာလုပ်နေမလဲကျမအရမ်းသိချင်ပါတယ်...။ ကျမကိုဆိုပြဖူးတဲ့သီချင်းတွေကို တယောက်တည်း
တိုးတိုးလေးများညည်းနေမလား ..။cry on my shoulder ဖြစ် ဖြစ်.. My love ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့..
တောထဲမှာများကင်းစောင့်နေရမလား ..။ဒါမှမဟုတ် ကျမကိုလွမ်းနေမလား??
ကျမစီများစာရေးနေမလား။။ သက်တောင့်သက်သာရှိမဲ့ အိပ်ယာလေးတခုထဲမှာအိပ်နေပြီလား။
သူတာဝန်ကျတဲ့နေရာကလည်း တောထဲမှာဆိုတော့ ကျမတို့နှစ်ယောက် တွေ့ဖို့နေနေသာသာ
ဖုန်းတောင်ဆက်လို့မရပါဘူး ။ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှ တွေ့ခွင့်ရမလဲကျမ မသိပါဘူး ။
သူဘာတွေလုပ်နေရလဲ ဆိုတာကျမမသိတော့ပါဘူး ..။
သူ့အကြောင်းစဉ်းစားပြီး သူ့ကိုသတိရပေးပါတဲ့ ။။ ကျမအခုအချိန်တိုင်း သူ့ကိုသတိရနေပါတယ် ။။
နေ့တိုင်းသူ့ကိုသတိရနေပါတယ်။ ညတိုင်းသူ့ကိုသတိရနေပါတယ် ။အရမ်းသတိရနေပါတယ် ။အများကြီးသတိရနေပါတယ် ။ အကြီးကြီးကိုသတိရနေတာပါ ။
ကျမ သူ့ကိုဘယ်တုန်းကမှမညာခဲ့ပါဘူး.. ကျမအခု သူ့ကိုလွမ်းနေ သတိရနေ ငိုနေမိတာတွေ
အားလုံးဟာ ရင်ဘတ်ထဲကလာတဲ့ စစ်မှန်တဲ့အရာတွေပါ ။မုသားနဲ့ဟန်ဆောင်မှု့တွေလုံးဝမပါ ပါဘူး ။
အားလုံးဟာ.....ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့ သံယောဇဉ်တွေကဖြစ်လာတဲ့ခံစားမှု့တွေပါ ..။
ဒီစစ်မှန်တဲ့ စကားကြောင့် သူနဲ့ကျမဘယ်လောက်ဘဲ ဝေးကွာနေပါစေ ကျမသူ့ကိုသတိရနေတယ်ဆိုတာ သူအလိုအလျှောက်ခံစားသိနိုင်ပါစေသား...။
AM 1:57 (12.8.2011)
( ကျမက ခံစားချက်တွေကိုဘဲရေးတတ်တဲ့သူမို့ ကျမရင်ထဲကခံစားချက်တွေကို
ချရေးထားတာပါ ....အပျင်းပြေသဘောမျိုးဖတ်သွားလို့ရပါတယ် ကျမစိတ်မဆိုးပါဘူး)
Posted by blackroze at Wednesday, August 03, 2011 8 comments
ကျမရဲ့အကြိုက်တွေကတော့ စားစရာကနေစပြောမယ်နော်...မြန်မာစားစရာတွေအကုန်ကြိုက်တယ် ။
ယိုးဒယားစားစရာတွေလည်းကြိုက်တယ် ။။ကျမကချဉ်ချဉ်စပ်စပ်တွေ ကြိုက်တဲ့သူမို့လို့ပါ ။
ကြေးအိုး နဲ့ရခိုင်မုန့်တီအရမ်းကြိုက်တယ် ။ ကျောင်းတက်တုန်းက အမြဲစားဖြစ်တဲ့ဆိုင်ကတော့ Ykko လို့ ခေါ်တဲ့ ရန်ကင်းကြေးအိုးပါဘဲ ။ကျမအထင်ပေါ့နော်.. အဲဒီ YKKO ကတခြားဆိုင်တွေထက်ဈေးနဲနဲလေးပိုပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့စားရတဲ့အရသာလည်းကွာပါတယ်။
တခြားဆိုင်တွေထက် ပိုကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ် ။
အဝတ်အစားဆိုရင်တော့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ Free style ကိုအကြိုက်ဆုံးပါဘဲ...
ချည်သားအဖြူရောင်လွင့်လွင့်လေး ဆိုရင်အရမ်းသဘောကျပေါ့ ။ Jean ကိုအရမ်းကြိုက်တယ် ။
Jean ဘောင်းဘီတွေက ဟောင်းသွားပေမဲ့လည်း ဒီဇိုင်းတမျိုးနဲ့လန်းတယ် ထင်လို့ပါ ။
တခြားချည်ဘောင်းဘီအပွလေးတွေလည်း သဘောကျပါတယ်..ဒါပေမဲ့ Jean ကတော့ အကြိုက်ဆုံးပါဘဲ ။။
အရောင်ထဲမှာလည်း အဖြူရောင်ကိုအကြိုက်ဆုံးပါဘဲ ။။အဖြူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အနက်ရောင်ကိုလည်း
ကြိုက်တယ် ။သူငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ပြောဖူးတယ် ။အဝတ်အစားဝယ်ရင် အဖြူနဲ့အနက်ယူတာ
များလို့ နင်ကcolour blind တဲ့ လေ ။စိတ်ဆိုးရအခက် မဆိုးရအခက် ။။အောင့်သက်သက်နဲ့ဘဲ
လက်ဝတ်ရတနာတွေထဲမှာတော့ အကြိုက်ဆုံးကတော့ diamond လို့ခေါ်တဲ့ စိန် ဆိုတဲ့ ရတနာ ပါဘဲ ။
(ဟဲဟဲ ..Blackroze တို့အကောင်းမကြိုက်ဘူးနော်...)
ပုလဲလေးကိုစိန်လေးကွပ်ထားတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းလေးများ တွေ့လို့ကတော့ မျက်လုံးကျွတ်မတတ်
ငေးမိတော့တာပါဘဲ....ကျမမျက်စိထဲမှာတော့ ပုလဲရဲ့နို့နှစ်ရောင်လေးကို စိန်ရဲ့တောက်ပမှု့လေးနဲ့
ရံလိုက်တဲ့အခါမှာ သိပ်ကိုလှပတဲ့ ရောင်စဉ်လေးတွေလို့ထင်မိတယ် ။ကဗျာဆန်ဆန်လေးနဲ့ကို
လှနေတဲ့ တွဲဖက်ညီတဲ့ ရတနာစုံတွဲလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ် ။။
ဖိနပ်ကတော့ သိပ်မရွေးပါဘူး ။။ဆောင်းတွင်းဆိုရင်တော့ အအေးလုံမဲ့ ဝေ့ါကင်းရူးပေါ့ ။။
နွေဘက်ဆိုရင်တော့ ခြေညှပ်အပါးလေးတွေဘဲစီးလိုက်တာပါဘဲ ။။
ခရီးသွားရင်းနဲ့စာအုပ်ဖတ်ရတာအရမ်းကြိုက်တယ် ။ ကားနဲ့ဘဲခရီးသွားသွား ။လေယာဉ်နဲ့ဘဲသွားသွား
ကျမအမြဲယူသွားတာကတော့ စာအုပ်တွေပါဘဲ ။ရန်ကုန်မှာတုန်းက ညဘက် Express ကားတွေစီးပြီးခရီးသွားရင် ကားပေါ်မှာတညလုံး စာအုပ်ဖတ်သွားတာပါ ..အဲလိုကားအကြီးကြီးတွေစီးပြီး
ခရီးသွားရတာလည်းသဘောကျတယ် ။အဲ...ဒါပေမဲ့ ခရီးသွားတဲ့အချိန် ကိုယ့်ထိုင်ခုံဘေးမှာ
ကလေးဆိုးလေးတွေရှိနေတာမျိုး ကိုတော့လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး ။တော်ကြာကလေးကရူးပေါက်ချင်လို့ ခဏခဏထပေးရတာနဲ့ ကလေးကဂျီကျလို့ အော်နေတာမျိုး ကျမစိတ်မရှည်ပါဘူး ။ ပိုဆိုးတာက
ကိုယ့်ထိုင်ခုံနောက်ဘက်ကခုံမှာ ဂဂျီဂဂျောင်လေး များပါလာလို့ကတော့ သွားပြီဘဲ....တချို့ကလေးတွေက
အရမ်းဆိုးပါတယ်.. မိဘအလိုလိုက်ထားတာလဲပါမှာပါ ။။ သူတို့လိုချင်တာမရရင် ရှေ့ခုံကိုခြေထောက်နဲ့
ကန်ပြီး သောင်းကျန်းတော့တာပါဘဲ ။ရှေ့မှာထိုင်နေရတဲ့ သူအဖို့ကတော့ ငလျှင်ကြောပေါ် ရောက်နေသလိုပါဘဲ ..ထပြောလို့လဲမရ... မချိပြုံးလေးပြုံးလို့ ။
မိုးရွာထဲထီးမပါဘဲလမ်းလျှောက်ရတာသဘောကျတယ် ။မိုးရွာနေတုန်းမိုးကြိုးပစ်တာ မိုးခြိမ်းတာ မကြိုက်ပါဘူး ။အလုပ်သွားတဲ့အချိန်မိုးရွာတာတော့မကြိုက်ဘူး ။
ဘောလုံးအရမ်းဝါသနာတယ် ။ချယ်ဆီးအသင်းအရမ်းကြိုက်တယ် ။ နိုင်ငံအသင်းထဲမှာဆိုရင် အီတလီ ။
ဘောလုံးသမားထဲမှာဆိုရင် ရှက်ဗ်ချန်ကို ..ဂျွန်တယ်ရီ ...မာလ်ဒီနီ ...တော့တီ ..ရော်နယ်ဒင်ဟို ...
(ကျမကြိုက်တဲ့ player တွေက နဲနဲတော့ အန်းတိတ်ဖြစ်နေမလားမသိဘူး .ကျမအခုဘောလုံးပွဲ
တွေလည်းမကြည့်ဖြစ်တော့ဘူးလေ ..အခုနောက်တက်player လေးတွေကိုလည်းမသိတော့ဘူး)
ကျမနာရီမကြိုက်ပါဘူး.... ဘယ်တော့မှနာရီမပတ်ပါဘူး.. အချိန်သိချင်ရင်ဖုန်းထုတ်ကြည့်လိုက်တာပါဘဲ ။။
ဒါပေမဲ့ တချို့ယောက်ကျားလေးတွေ နာရီသားရေကြိုးအမဲလေးတွေ ပတ်ထားရင်
အရမ်းသဘောကျတယ် ။။ဘာလို့မှန်းဆိုတာတော့ သေချာမပြောတတ်ဘူး ။စိတ်ထဲမှာတော့
တန်ဘိုးကြီးတဲ့ ရွှေရောင်နာရီလေးတွေ နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတွေက ထုတ်တဲ့ နာရီတွေထက် အဲလိုလက်ပတ်ကြိုး အမည်းရောင်နဲ့နာရီလေးတွေကို ပိုသဘောကျတယ်...။။
တချိန်မှာ..ချစ်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ကျမနာရီလေးတလုံး သူ့အတွက်လက်ဆောင်ပေးမှာပါ ။
အဲဒီနာရီလေးကလည်း လက်ပတ်ကြိုးအမည်းရောင်လေးနဲ့ဆိုတာ မေးဖို့လိုမယ်မထင်ဘူးနော် ^^
ကျမဆံပင်အရှည်ကိုအရမ်းသဘောကျတယ် ။။ဒါပေမဲ့ဆံပင်စည်းတာကိုတော့ မကြိုက်ဘူး ။။
မုသားကိုတခါတရံမှာသုံးပေမဲ့ သူတစ်ပါးထိခိုက်နစ်နာအောင်လိမ်တာမျိုး မကြိုက်ပါဘူး..